फाल्गुन ०८, २०७५, बुधबार
– राजेश कार्की
कुनै उपन्यासका नामै सुन्दा पढूँ–पढूँ लाग्छ । कौतूहल जगाउन सक्ने त्यस्ता नामहरूमा ‘शिखरको ढुङ्गा’ पर्दैन । यो नामै केही भद्दा र कमजोर लाग्छ । आकर्षक नाम यो भएन । व्याकरण पनि मिलेको छैन । कि ‘शिखरको ढुङ्गो’ भन्नु वा ढुङ्गो भन्न मन नलागेको भए ‘शिखरका ढुङ्गा’ भन्नु । नाम रखाइमा अपरिपक्वता बाहिरैबाट देखिन्छ । पहिलै नजरमा पढूँ लाग्ने उपन्यास यो होइन ।
जसलाई हिमालमाथि रुचि छ, त्यसलाई भने उपन्यासको आवरणले केही तान्न पनि सक्ला । आवरणमा केही आरोहीहरूको लर्को हिमालतिर उक्लिँदै गरेको चित्र छ । शिखरको ढुङ्गा भनेर उपन्यासले सगरमाथाको ढुङ्गालाई भनेको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । कसैलाई त यो पनि लाग्ला, उपन्यास लेख्नैका लागि उपन्यासकारले आफ्नो नाम बदलेर ‘सरल सहयात्री’ राखेछ ।
लेखकको नाममा नेपाली परम्परा हराएको छ । पौडेल, दाहाल वा लामा, शेर्पा यस्तो केही पनि छैन । बहादुर, प्रसाद, कुमारी, माया, वीर, राज, नाथहरू पनि छैनन् । ‘सरला’ नभएकाले लेखक पुरुष होला भन्ने अनुमान चाहिँ हुन सक्छ तर लक्ष्मी, तारा, सुमन, देवी आदि नामले महिला र पुरुष छुट्याउन नसकिए झैँ यस्तो द्विविधा ‘सरल’मा पनि नहोला भन्न सकिन्न ।
उपन्यासकारको फोटो त राख्नु नि । पुस्तकको पृष्ठभागमा मुसुक्क हाँसेर ‘पोज’मा बसेको ‘सेलिब्रिटी’ फोटो चाहिने, त्यो पनि छैन । कहिलेकाहीँ स्रष्टाको फोटोले पनि उपन्यास पढ्नलाई प्रेरित गर्छ । लेखक परिचय भनेर प्रस्तुत गरिने लामो सूचीले पनि कहिलेकाहीँ आकर्षित नै गर्छ । यी सबै सूचना उपन्यासमा छैनन् । सँगै यात्रा गर्ने सहयात्री त जो पनि हुन सक्छ । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा लेखकलाई, उसको पदीय हैसियत र घरानालाई चिनाउन समेत खासै रुचि राखेको जस्तो लाग्दैन ।
पृष्ठभागमा तल ठूला अक्षरमा साङ्ग्रिला बुक्स भनेर प्रकाशकको नाम लेखेपछि माथि पुस्तकलाई चिनाउने प्रयोजनका लागि साना अक्षरमा केही अनुच्छेदहरू लेखिएका छन् । त्यो पढेपछि थाहा हुन्छ, उपन्यासकार राजनीतिक पृष्ठभूमिका सगरमाथा आरोही रहेछन् र त्यही आरोहण–अनुभवको जगमा रहेर राजनीतिक उपन्यास लेखेका रहेछन् ।
सरल सहयात्रीलाई चिनेको मान्छे म होइन । माघ २९ गते देवीजीलाई भेट्न प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, कमलादी पुगेको थिएँ । उहाँ अपर्झट बाहिर जानुभएकाले दुई घन्टा जति कुर्नु पर्ने भयो । क्यान्टिनमा चिया खाँदै पर्खिबसेको थिएँ । उपन्यास विमोचनका लागि भनेर प्रचण्ड आए । तामझाम त हुने भैहाल्यो । समय बिताउन म पनि गएँ । नचिनेका मान्छेहरू नै धेरै थिए । मञ्चमा उपन्यासकार नयनराज पाण्डेलाई देखेपछि राहत जस्तो भयो । मान्छे धेरै भएकाले म उभिएरै सुन्न थालेँ । प्रचण्ड र नयनजी एउटै मञ्चमा देखेको यो पहिलो पालि थियो । नयनजीले के भन्नुहुँदो रहेछ भन्ने उत्सुकता पनि भयो ।
नयनजीले उपन्यासमाथि बोल्दा खुलेर प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँको प्रसंसा सुन्दा मेरो हृदयमा दुइटा कुरा खेले कि त यो विमोचन कार्यक्रम भएकाले उहाँले यसको आलोचना गरिरहनु भएको छैन वा प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथि बनाएको कार्यक्रममा उनीसम्म पहुँच पुगेको व्यक्ति भोलि काममा आउन सक्छ भनेर चाकरी बजाउँदै हुनुहुन्छ । उहाँको चरित्र हेर्दा दोस्रो काम त नगर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ तर मान्छे फेरिन के बेर भन्ने पनि कतै–कतै भइ नै हाल्छ । नत्र माओवादीले लेखेको उपन्यासमा यत्रो तारिफ गर्नु मलाई सहज लागेको थिएन । उनीहरूले लेखेका कथा, कविता, उपन्यासहरू मैले पनि पढेको थिएँ । उनीहरू खालि भाषण र नाराहरूको बलमा साहित्य लेख्छन् भन्ने मलाई थाहै थियो ।
नयनजी बोलिरहँदा म कान चाहिँ नयनजीलाई र आँखा त्यो अपरिचित लेखक सरल सहयात्रीलाई दिइरहेको थिएँ । वेलावेलामा नयनजीलाई पनि हेर्थेँ । उहाँ द्विविधारहित भएर झन्–झन् खुला हुँदै उपन्यासको प्रशंसामा भावविभोर भएर डुब्नुभएको थियो । कहीँ कतै आलोचना गर्नुहोला भन्ने आशा जो थियो, त्यो भएन । उहाँको समीक्षा सुनेपछि मेरो पूर्वधारणामा पहिलो चोटि धक्का लाग्यो ।
अब मलाई थोरै आश थियो सुधा त्रिपाठीमाथि । उनी पनि माओवादी भएकाले आलोचना गर्दिनन् भन्ने त मलाई लागेकै हो तर नारीवादी भएकाले केही भन्लिन् भन्ने आशा छँदै थियो । उनी मलाई मन पर्ने समीक्षक त होइनन् तर कमजोरी देखाउलिन् भन्ने आशामा म उनलाई पनि सुन्दै थिएँ । कमजोरी उनले पनि देखाइनन् । दुवै समीक्षकको एउटा साझा कुरा रह्यो, उपन्यासको अन्त्यमाथिको सामान्य असन्तुष्टि । नयनजीले त त्यो पनि ‘मेटाफोरिक’ हो भनेर प्रकारान्तरले बचाउ नै गर्नुभयो र नाम पनि ‘शिखरको ढुङ्गा’ नै अर्थपूर्ण छ भनी तर्क गर्नुभयो ।
प्रचण्डको वक्तव्य मलाई सुन्नु थिएन । खासमा साहित्यिक कृतिको विमोचन गर्न नेता ल्याउने चलन मलाई मन पर्दैन । यहाँ पनि त्यही भएको थियो । तर, उपन्यास किनेर बोक्ने इच्छा मनमा भयो । म बाहिर निस्केँ । ‘हार्डकभर’ मात्रै छन् । मूल्य ५९५ । के डकैती हो यो ? एउटा उपन्यासलाई छ सय ? पाँच सयमा दिएको रहेछ, तैपनि मैले किनिनँ ।
कहाँ जाऊँ ? देवीजीलाई फोन गरेँ । अझै आधा घन्टा लाग्छ भन्नुभयो । मन नहुँदानहुँदै फेरि भित्रै छिरेँ । प्रचण्ड बोल्दै रहेछन् । के बोल्नु उपन्यास पढेको छैन, तैपनि प्रमुख अतिथि हुनुपरेको छ । मलाई प्रचण्डसँग भन्दा पनि रिस लेखक र प्रकाशकसँग उठ्यो । यस्तो मान्छेलाई बोलाउनु भनेको प्रचारको मोह नै हो भन्नेमा म थिएँ तर कुरा सुन्दै जाँदा त्यसदिन मेरो मनमा अलि अर्कै कुरा प¥यो ।
यो उपन्यास सगरमाथा आरोहणसँग सम्बन्धित तर राजनीतिक उपन्यास हो भन्ने त बुझिसकेकै थिएँ । अब थाहा पाएँ, आरोहण दलका दश जनामध्ये नौ जना मात्रै जीवित छन्, प्रकाश दाहालको मृत्यु भयो । आरोहणकै विषयमा उपन्यास लेखियो तर त्यो हेर्नलाई प्रकाश दाहाल जीवित छैनन् । उनको स्मृतिलाई गाढा बनाउन पनि उनका पिता प्रचण्डलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि म अलि भावुक भएँ । जब कि प्रकाशलाई पनि मन पराउने मान्छे म होइन तर विचार र राजनीति नमिले पनि छोराप्रतिको संवेदनाका विषयमा म अलि पग्लिएँ । त्यसपछि लेखक र प्रकाशकप्रतिको पूर्वाग्रह पनि केही घट्यो ।
प्रचण्डको भाषण चलिरहँदा म नयनजी र सरल सहयात्रीको अनुहारमा हेर्दै थिएँ । कार्यक्रम सकिएपछि नयनजीसँग भेट्ने इच्छा भयो । बाहिर निस्केपछि मैले नयजीलाई भेटेर सोधेँ, ‘विमोचन भनेर प्रशंसा गर्नुभएको हो कि उपन्यास साँच्चै राम्रो छ ?’
‘उम्दा’, उहाँको जबाफ थियो ।
मैले पाँच सय हालेरै उपन्यास किनेँ किनभने अब एउटै उपन्यास पढेपछि नयनजी र सरल सहयात्री दुवै जनाको मूल्याङ्कन एकैचोटि हुने भयो ।
देवीजीसँगको भेटघाट सकेपछि म सरासर डेरामा फर्किएँ र पहिलो काम उपन्यास पढ्न थालेँ । नभन्दै उपन्यासले तान्यो । त्यो रात र भोलिपल्ट बिहान गरेर उपन्यास पढिसकेँ । नयनजीले ठिकै भन्नुभएको रहेछ ।
नचिनेको भए पनि लेखकलाई बधाई दिनुपर्छ । उसलाई हौसला होला भनेर फोन वा इमेल केही छ कि भनी हेरेँ, पुस्तकमा त्यो रहेनछ । मलाई लाग्यो, म यसका बारेमा लेख्छु । लेख्न पनि थालेँ, तर नयनजीको समीक्षा सुनिसकेको हुनाले मलाई मेरो लेखन बारम्बार कमजोर जस्तो मात्रै लागिरह्यो ।
मलाई लेख्न मन थियो – शिखरको ढुङ्गा एउटा दुर्लभ उपन्यास हो । अरू कसैले लेख्छु भनेर यो लेखिँदैनथ्यो । जनयुद्ध, आरोहण र उपन्यासकार व्यक्तित्व । यी तिनै ओटा गुण एउटै व्यक्तिमा हुनु नै दुर्लभ कुरा हो । पूरै राजनीतिक भएर पनि राजनीतिक होइन जस्तो देखिनु उपन्यासको दोस्रो शक्ति हो । जनयुद्धलाई भन्ने परम्परागत तरिकालाई तोडेर थाहै नपाई राजनीति सिकाउने यसको कलाले मलाई समेत जनयुद्धप्रति सहानुभूतिशील बनाइदियो । रुसी लेखकहरूका राजनीतिक उपन्यास पढ्न खँदिला लाग्ने तर नेपाली लेखकका जनयुद्ध सम्बन्धी साहित्य पढ्दा चिढचिढाहट पैदा हुने र कतिपय वेलामा त दिक्कै लाग्ने जो हुन्थ्यो, त्यसलाई यसले उल्टाइदिएको छ भनेर लेख्ने मन थियो । कतै न कतै यो लेखकसँग भेटेर तपाईंको उपन्यास पढेपछि ममा शेर्पाहरूप्रति सम्मानको भाव पलाएको छ, एकचोटि जनयुद्धमा आफैँ सहभागी बन्न मन लागेको छ भन्ने रहर थियो, अझै छँदै छ ।
गम्भीर महत्त्वको एउटा नयाँ उपन्यास नेपाली साहित्यले पाएको छ । अब कसैले दुई–तिन दिनको फुर्सद छ, के के पढ्ने होला भनेर कसैले सोध्न आए एउटा नाम म यही भन्ने छु, ‘तपाईं शिखरको ढुङ्गा पढ्नुहोस् ।’